Mee ka Tralọ ahịa na fficlọ Ahịa na Onlinentanetị na FATWIN | Martech Zone
Mee ka Tralọ Ahịa Na-echekwa Footkwụ na Onlinentanetị na FATWIN
Fraịde, Septemba 20, 2013 Fraịde, Septemba 20, 2013 Douglas Karr
Enwere m obi ụtọ ịnọdụ ala na onye guzobere ya na otu FATWIN unyahu ka ha bidoro beta ha na M-Tech ogbako na Indianapolis. Scott bu onye nchoputa na onye isi oche nke Ndị ụlọ ọrụ CIK, a tụrụ ahịa ahịa na ọrụ ụlọ ọrụ na-enyere ụlọ ọrụ aka afọ iri ugbu a. CIK malitere FATWIN ™, usoro teknụzụ ahịa nke na-enyere azụmaahịa aka draịva weebụ na ụlọ ahịa nchekwa site na egwuregwu, asọmpi na mgbapụta mgbapụta.
N'ebe ahia ahia taa, ulo oru di iche iche nwere nsogbu n’iru na ikwagide okwalite. Site na FATWIN, anyị na-ebugharị egwuregwu na asọmpi dị mma nke na-eme ka ọnụọgụ ụkwụ ọnụọgụ ma ọ bụ ntanetị n'ịntanetị na n'ikpeazụ, mgbanwe. Scott Hill, ngalaba-onye guzobere na onye isi oche maka ụlọ ọrụ CIK.
Ihuenyo Winner nwere ihe nrite na mgbapụta gosipụtara yana onyinye ngwaahịa.
Ihuenyo FATWIN Kiosk nwere akara ngosi doro anya nke ndị mmeri.
Mgbasa ozi n'ịntanetị nke na-eme ka mmadụ gaa asọmpi n'ịntanetị ma ọ bụ banye na ntaneti mkpọsa na kiosk.
Mgbasa ozi edere nke na-eme ka mmadụ gaa asọmpi n'ịntanetị ma ọ bụ banye na ntaneti mkpọsa na kiosk.
OTU asọmpi FATWIN ga-eji ihe nrite ndị a ga-egwu n'okpuru.
CIK na-enyere ndị azụmaahịa aka ịchụ ụzọ site na mgbasa ozi ọdịnala na ntanetị ruo ihe karịrị afọ iri ma ha achọpụtala isi nsogbu ole na ole FATWINFATWIN zuru ike:
Trust - Naanị 9% nke ndị ọbịa tụkwasịrị obi na asọmpi dị irè ma a na-enye onyinye ndị ahụ n'ezie. FATWIN's transperent online mwekota na-elekọta mmadụ mwekota idozi a. Ihe niile ndị mmeri na-eziga n'ihu ọha na ozugbo na ntaneti ahia - site na kiosk, na na microsite maka zoo.
Andntanetị na Na-anọghị n'ịntanetị - enwere ọtụtụ ibipụta na zoo asọmpi ozi. Ma enwere ọtụtụ asọmpi n'ịntanetị. Agbanyeghị, enwebeghị ikpo okwu nke na-agwakọta ma na-ebugharị ma ịntanetị na nke na-adịghị n'ịntanetị na-ere ahịa na azụmaahịa na azụmaahịa. Nchikota kiosk nke FATWIN na nbata, ọrụ mbiputa, na microsite luru ma wepu ha abuo.
Na-akpali akpali - ụlọ ọrụ anaghị enwekarị ego maka ihe nrite dị mma iji kpalie atụmanya ịzaghachi. Ihe onyinye CIK dị iche iche ka ha wee maa mma. E nwere ọbụna jackpots na-aga n'ihu na ọrụ ahụ (nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 40,000). Ruo ugbu a, ọrụ ahụ enyela ihe karịrị $ 3.7 nde - lelee FATWIN ebe nrụọrụ weebụ maka akara ndụ.
Ịmara - Ọ bụ ezie na FATWIN bụ ngwaahịa, ọ na-abịa na otu ndị ọkachamara maara otu esi agba asọmpi nke na-eduga n'ịzụ ahịa gị. FATWIN na-ejikwa ihe niile gbasara iwu na usoro iwu nke asọmpi… ị na - enyere aka ijikọ ajụjụ ndị ị ga - eduga ka ị nwee ike tozuo ndu ma nweta nsonaazụ!
A na-egosiputa ihe eji eme ihe na data ha prequalification maka ndị ahịa gị ịchụso ha.
FATWIN na - egosiputa uzo ahia obula - tinyere na ntaneti ahia.
FATWIN na-arata ndị na-eri ego iji chekwaa ego, merie ihe nrite ma were egwuregwu dị elu, azụmahịa a ma ama na-enye ọkwá nke na-enye nkwado na ntanetị na ụlọ ahịa. Ulo oru a nwere ike iji ikpo okwu nweta ndi ahia ohuru, weputa ndu, ma soro ihe nchoputa ozugbo site na uzo uzo nyocha nke FATWIN.
Weebụsaịtị ka bụ ihe eji enyere ndụ aka
Cinegif: Chepụta Cinemagraphs na Animated Onyinye